Veruzhinji Vanoti VaMugabe Ndivo Vaitizwa Munyika
Mhuri yeZimbabwe inogara muSouth Africa inoti gore ra2017 ranga riri rimwe remakore akaomesesa zvikuru.
Vakawanda vanoti kubviswa nemauto kwehurumende yaitungamirwa naVaRobert Mugabe gore ra2017, kuri kupa kuti vamwe vati zvinhu zvingangonake gore rino kumhuri yeZimbabwe inogara mu South Africa.
Mafungiro everuzhinji anoratidza kuti VaMugabe ndivo vaikonzeresa kuti vana veZimbabwe vatize munyika vachienda kunze kwenyika uko vaisvikotambura zvikuru.
Mukuru weZimbabwe Exiles Forum, VaGabriel Shumba, vanoti nekushanduka kwakaitika hurumende muZimbabwe, vanotarisira kuti gore rino vanhu vachafamba vakasununguka pamuganhu we Zimbabwe ne South Africa weBeitbridge.
Va Emmanuel Mago, avo vasina kumbobvira vashanda basa ripi zvaro muhupenyu hwavo nekuda kwekupofomara, vanoti ruzhinji rweavo vakaremara, vachiri kuomerwa nehupenyu nekuda kwekuti hurumende inoratidza kushaya hany’a navo.
VaVasco Karimupfumbi vanobva kwaChiendambuya vanoti vanovimba kuti VaMnangagwa kana ani zvake achatungamira Zimbabwe, achatungamira zvine hungwaru kudarika zvaiitwa naVaMugabe.
Mashoko aVaKarimupfumbi atsigirwawo naVa Tapfumaneyi Marufu, avo vanoti gore rapfuura range rakaomesesa asi vanovimba kuti gore rino zvinhu zvichati nakeyi.
Mutungamiri wevechidiki mubato rinopikisa reMDC mudunhu reJohannesburg, VaTime Siphum, vanoti kusarudzwa kwaVa Cyril Ramaphosa semutungamiri mutsva webato re ANC muSouth Africa, kuchabatsira zvikuru mhuri yeZimbabwe inogara muSouth Africa.
Asi kunyange hazvo pangave nemufaro wekuti VaMugabe havasisipo panyanga, veruzhinji havazivi kuti mamiriro ezvinhu munyika achamira sei mune ramangwana.
Vanoti kunyange hazvo vari kufara nezvakaitika munyika gore rapfuura, pane kakunyunyuta nezviri kuitwa nemauto mune zvematongerwe enyika uyewo nezvichabuda musarudzo dzichaitwa gore rino zvikuru kana bato riri kutonga rikakundwa.